Amadolobha esifundeni saseDonetsk: Mariupol, Kramatorsk, Artemovsk, Krasnoarmeysk, Konstantinovka. Incazelo emfushane, isithombe
Isifunda saseDonetsk yisifunda esikhulu nesibalulekile sezwe. Imishini isakhiwe lapha. Ngokuphelele, isifunda sinemizi engu-52 enesimo sedolobha. Manje, ngemva kokulwa kwempi, lesi sifundazwe senze izinguquko. Kusukela ngo-2014, amanye amadolobha esifundeni saseDonetsk awawulaleli uhulumeni wase-Ukraine. Lesi yisikhungo sesifunda - iDonetsk, Gorlovka, Yasinovataya, njll Manje le ndawo kunzima ukuyibiza ngokugcwele. Ezinye zalezi zindawo zazibaluleke kakhulu ezweni. Kwamanye, amalahle ahlanjululwe, elinye (Yasinovataya) - umzila omkhulu wesitimela. Nokho, esifundeni kukhona leyo mizi yesifunda saseDonetsk esilawulwa yi-Ukraine. Ake sibheke ezinye zazo.
Idolobha laseConstantinovka, esifundeni saseDonetsk
I-Konstantinovka idolobha lase-Ukraine, elisendaweni yaseDonetsk. Itholakala emfuleni iKrivoi Torets. Umlando weConstantinovka waqala ngo-1812, umninimzi waseNomikosov owasekelwe emalini yakhe wasungula umuzi waseSanturivovka. Ngaleso sikhathi kwakukhona imindeni engamashumi amabili kuphela. Phakathi nekhulu le-XIX kwakhiwa umzana ogcwele, okuthiwa uKonstantinovka ngegama lomnikazi. Ngokushesha isiteshi sesitimela savuleka eduze nomuzi . Ngenxa yalokhu, idolobha laseConstantinovka esifundeni saseDonetsk liye laba isikhungo sezimboni kancane kancane. Ngo-1895-1897 kwakhiwa izitshalo zamakilasi namakhemikhali, ukukhiqizwa kwe-metallurgical kanye ne-bottling kwaqala. Eminyakeni embalwa kamuva, umshini wokukhiqiza izibuko kanye nesibuko ekwakheni ingilazi yakhiwa. Ngokuhambisana nokukhula komkhakha, idolobha ngokwayo lakhula lakhula. Ukuhlala kwaqhubeka nokukhula ngesikhathi seSoviet. E-Konstantinovka kwakhiwa izindawo ezingaphezu kwezingamashumi amabili zezimboni.
Namuhla inani labantu baseConstantinovka liba abantu abayizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu nanhlanu. Emzini kukhona ukuhlangana kwezitimela, imboni yeglasi ithuthukiswa.
Idolobha lase-Artemovsk, esifundeni saseDonetsk
Idolobha lase-Artemivsk lisendaweni yaseDonetsk e-Ukraine. Itholakala ogwini lomfula iBakhmut. Isimo sezulu kulezi zindawo silinganiselwe, futhi kujwayelekile esifundeni saseDonetsk: ehlobo kunzima, ubusika abubandayo kakhulu. Umuzi wasungulwa ngo-1571 njengokuthunyelwe kwezwe. Ngasekupheleni kwekhulu le-XIX, ingilazi, i-alabaster, izitini nezinye izitshalo eziqhutshwa lapha. Maphakathi nekhulu lama-20, i-factory yewayini elikhazimulayo kanye nesitshalo esingazange sibe nesibindi saqala ukusebenza lapha. Ngo-1924, idolobha lishintsha igama layo: ngokuhlonishwa kwesinye seziphathimandla zaleso sikhathi, u-Bahmut wabizwa kabusha ngokuthi u-Artemovsk (esifundeni saseDonetsk).
Ngo-2015, idolobha libuyiselwe egameni layo langaphambili - i-Bahmut. Manje i-Bahmut yidolobha lezimboni elinabantu abangaba yizinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalombili. Idokodo idolobha likasawoti, ikhiqiza izinto zokwakha nemishini. Imithi, imfundo kanye namasiko zakhiwa lapha: izibhedlela, izikole, imilayibrari, izikhungo zamasiko namaqembu asebenza, isonto lobu-Orthodox lekhulu le-18 ligcinwa futhi lisebenza.
I-Krasnoarmeysk, isifunda saseDonetsk
Idolobha laseKrazil laseKrasnoarmeysk lakhiwa ngo-1875 njengendlela yokuhamba ngomzila wesitimela. Ngo-1884, isiteshi kanye nesakhiwo se-depot sakhiwe, izitimela zokuqala zase zidlulile esiteshini saseGrishino (ngaphambili iKrasnoarmeysk). Isiteshi sathuthuka kancane kancane, sakha abahlali abasha. Ngemva kwesikhashana, izimayini zamalahle zivuliwe lapha.
Ezikhathini zamaSoviet Grishino yaqhubeka ithuthuka. Ngo-1938 wanikezwa isikhundla somuzi, kwathiwa ngokuthi iKrasnoarmeysk. Kuze kube sekupheleni kwekhulu leminyaka lama-XX, waqala ukuthuthukisa. Lapha kwakhiwa izinto zokwakha izindlu, izimboni nezamasiko.
Manje umuzi waseKrasnoarmeysk wesifunda saseDonetsk uhlala abantu abangaphezu kuka-60 000. Umnotho wedolobha ubanjwe ikakhulukazi embonini yamalahle. E-Krasnoarmeysk futhi isebenza izitshalo zokwakha umshini, ubisi kanye nesitshalo sokupaka inyama. Umuzi unekolishi lokufundisa, isakhiwo sezemidlalo, izincwadi, izindlu zamasiko, izibhedlela kanye ne-polyclinics.
Dzerzhinsk, esifundeni saseDonetsk
I-Dzerzhinsk idolobhana laseMelika elimba ngamaminerali elinabantu abangaba yizinkulungwane ezingamashumi amathathu nanhlanu. Umlando wedolobha uqala ngokuvuselelwa kwengxenye yabakhileyo kusukela ekuhlaleni kukaZaitsevo kuya epulazini laseShcherbinovsky ngo-1800. Ngemva kwamashumi eminyaka ambalwa, amapulazi wendawo ahlangene futhi waziwa ngokuthi umuzi waseShitsbinovka. Kusukela ngalesi sikhathi, ukumbiwa kwezimayini zamalahle kwaqala ukukhula lapha, kwakhiwa isitshalo se-coke, kwavulwa amamineramu amasha. Ngenxa yalokhu, idolobha laseDzerzhinsk, esifundeni saseDonetsk liye laba isikhungo sezimboni. Phakathi nenkathi yeSoviet, ukumbiwa kwemali yamalahle kwakhula. Ngo-1938, uScherbinovka wabizwa ngokuthi uDzerzhinsk futhi wanikezwa isimo somuzi. Ngo-2015 idolobha laphinde laqanjwa kabusha, manje eToretsk.
Manje umthombo oyinhloko wemali edolobheni, njengangaphambili, yimboni yamalahle. Kukhona nesitshalo se-phenolic, isakhiwo semishini esakhiwe. Ngokuvamile, isiko nokunakekelwa kwezempilo kusezingeni elihle futhi lihlangabezane nezidingo zabakhamuzi.
Kramatorsk, esifundeni saseDonetsk
I-Kramatorsk yidolobha elikhulu lase-Ukraine elinabantu abangu-160 000. Idolobha namadolobha azungezile zihlala esigodini somfula iKazzenyi Torets. Ukushisa kushisa futhi kuyomile, futhi ubusika bubandayo.
Umlando womuzi uqala ngo-1868, lapho isitimela seKratorskaya sasivela esitimeleni esakhiwa kulezi zindawo. Ngokushesha lapha, izakhi zokuqala zakhiwa: ukwakha umshini, bese u-samente. Izikole zaqala ukwakhiwa futhi izindlu zokuhlala zakhiwe.
Ezikhathini zaseSoviet, ukuhlala kuqale ukukhula ngokushesha futhi kutholakale isimo somuzi. Izitshalo ezintsha, izibhedlela, ezikoleni zakhiwa, idolobha lenziwa ngcono. Ukugcizelelwa okuyinhloko komnotho ku-engineering. Nokho, lokhu akumangalisi, ngoba amadolobha aseDonetsk, okokuqala, izikhungo zezimboni.
Namuhla I-Kramatorsk ingenye yemizi ebaluleke kakhulu e-Ukraine. Manje kukhona izitshalo ezimbili zokwakha umshini, isitshalo esinamandla-ithuluzi, izitshalo ezimbili ze-metallurgical, kanye nezimboni eziningi zokukhanya nokudla.
Indawo yaseMariupol, iDonetsk
Ichweba elikhulu elwandle lokuthengisa, elisegwini lolwandle lwase-Azov, libizwa ngokuthi iMariupol. Kuyinto yesibili ngobukhulu ngokwezibalo zabantu, uma uqhathanisa yonke imizi yesifunda saseDonetsk. Ihlobo kulezi zindawo lide futhi liyashisa, ubusika bufushane futhi bubucayi. Ukushisa okuvamile kwansuku zonke yi-10.5 ° C.
I-Mariupol yasungulwa ngo-1778. Ngenxa yokwakhiwa kwezitimela ngo-1882, idolobha laqala ukukhula ngesivinini esisheshayo: umgwaqo wawuxhumene ne-seaport nezikhungo ezibaluleke kakhulu zezimboni zezwe, okwabangela ukukhushulwa okukhulu kwenzuzo yezimpahla. Ekupheleni kwekhulu le-XIX iMariupol wathola isikhundla seziko elibalulekile lezentengiselwano nezentengiselwano eningizimu yoMbuso waseRussia. Kunezimboni eziningi ezakhiwa lapha, ukwakha imishini kukhula.
Namhlanje i-Mariupol iyisakhiwo esibalulekile somshini wokwakha umshini we-metallurgical of Ukraine. Idolobha linamayunivesithi amathathu kanye namagatsha amaningana angaphandle kwedolobha, kanye nezokwelapha, imetallurgical, umculo nezinye izikole. Nansi omdala kunkundla yaseshashalazini yedatha yaseDonetsk. Izakhamuzi zendawo nezokuvakasha zijabulela ukuthandwa kwamabhishi omuzi: ulwandle lapha lufudumele kakhulu futhi alujulile kakhulu.
Kungani ngine-icicles? Indlela yokwenza i-icicle?
Uyini ubusuku? Ukuhlaziywa okuningiliziwe
Okuqukethwe nokuhlaziywa kwembongo ka-Nekrasov "Emgwaqweni"
I-Population of Austria: izici, ubuningi nezinombolo
Izindlela zokufunda esikoleni samabanga aphansi
Zingaki amaphiko ama-beetles anakho? Izici zesakhiwo samaphiko e-beetle
Izihloko nezithombe: indoda eqolo kakhulu emhlabeni
Nokuzwelana izigaba: umzalwane umka ibizwa ngokuthi ...
I ebaziwe "Laocoön futhi Namadodana Akhe": incazelo kanye nokubuyekeza
Zingaki amalitha e cube
Imishini slot geyminatory inthanethi khulula manje inthanethi
Umshayeli we-ID - kuyini? I-ID yocingo ye-Android. Isofthiwe ye-smartphone
Yezindlela ezingcono kakhulu ukuze uhlale unempilo ngemva kweminyaka engu-40